Mashruucyada Mashruucyada Mashruucyada Maareynta | FXCC
Home / Trading / Qalabka Forex / Mashruucyada Mashruucyada Soomaliya
Siciradaada Soomaliga Mawduuca
Poll Poll waa qalab xasilooni oo muujinaya rajada laga filayo muddada u dhexeysa muddooyinka ilaa iyo bartamaha laga soo bilaabo khubarada ugu sareeya suuqa.
Tilmaame-celinta lacagta sirta ah ayaa muujinaya taariikhda shan sano ee la xidhiidha tobanka xisaabood ee ugu muhiimsan ee FX. Sahankan waxaa la qabtaa jimce kasta waxaana lagu daabacaa 15: 00 GMT. Sahankan waxaa lagu soo daabacay dhammaan marxaladaha kala duwan: Hal toddobaad, hal bil, hal rubuc waxaana ka mid ah qiimaha celceliska mar kasta oo horey u ah. Doorashadan waxaa raaci kara ganacsatada, faallooyinka suuqyada iyo tacliinta sare.
Iyadoo widgetkan, macaamiishayadu waxay heli karaan alaab khaas ah. Waa astaanta xasaasiga ah ee muujinaya mawduucyada la soo xulay ee ku xeel-dheer xaaladaha dhow iyo kuwa dhexdhexaadka ah isla markaana xisaabinaya isbeddellada. Waa in aan loo qaadin sidii calaamad ama bartilmaameedkii ugu danbeeyay, laakiin sida khariidadda kulaylka ee heerarka sarrifka ah ee meesha laga soo saaro iyo rajada laga qabo.
Ma jiraan wax macluumaad ah; Saadaalinta waxaa la uruuriyaa kadibna isla markiiba la sii daayaa, sida tilmaame aan la joogin, ma jirto dib u dhac. Maadaama tani ay tahay qalab aad u faa'iido leh marka lagu daro farsamo, ama falanqaynta aasaasiga ah ee falanqaynta.
Natiijada saadaashan waxay muujinaysaa xogta xasaasiga ah, oo ku salaysan tusaale tijaabo ah oo ka kooban shan iyo shan iyo konton hogaamiye ganacsi oo hor leh, illaa daaqad shan sano ah.
Ganacsatada waxay muujiyaan dabeecado isku mid ah dabeecadda aadanaha ee dhinacyo badan; Xasaasiga ah ee dantu waa in la raaco dad badan oo suuqa ka soo jeeda. Tilmaamayaasha kaleba, si kastaba ha ahaatee, waxay horumariyaan fekerka ka hortagga. Isticmaalidda macaamiisha qalabkan ayaa tilmaamaya xagjirnimada xagjirnimada iyo sidaa darteed iska ilaali in la dhexgeliyo maskaxda.
Qalabkani waxaa laga heli karaa iyada oo la adeegsanayo Hubka Ganacsiga ee loogu talagalay dadka haysta xisaabta FXCC.
Soo gal si aad u hesho Qalab ganacsi oo lacag la'aan ah
Si aad u dalbato qalabkaaga bilaashka ah, si fudud u gal macaamiisha Hub Hub aqri
Shuruudaha iyo shuruudaha iyo codsigaaga samee.
Lacagta Lacagta Diidmada